Ahoana ny fomba hamoronana ny effets triangular pixelated | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba hamoronana ny vokany telozoro pixelated
Jorge Neira | | Tutorials
Ny famolavolana sary dia iray amin'ireo faritra fahalalana miparitaka erak'izao tontolo izao ankehitriny.
Izany dia vokatry ny fomba ahafahan'ny olona miditra amin'ity fitsipi-pifehezana ity raha tsy mila miditra amin'ny institiota oniversite hahafahany mampihatra ny fahalalana ampianarina ao anatiny ary ankehitriny, izay maniry manokana fotoana be dia be amin'ny fanofanana sy fanovana Afaka manao asa mahatalanjona ianao, ny zavatra rehetra dia miankina betsaka amin'ny fanoloran-tena sy ny fanoloran-tena tadiavin'ny olona tsirairay amin'ny asany.
Ny famolavolana sary dia misy lafiny roa lehibe, endrika sy kanto, fitambarana izay nahatonga olona marobe liana hiasa amin'ity karazana programa fanovana ity. Azontsika atao koa ny miresaka olana ara-kolontsaina mampiditra ary toa misy izany faritra amin'ny famolavolana sary natokana ho an'ny famolavolana modely amin'ny soratra fomba an-tanàn-dehibe, noho izany dia nitondra mpanjifa sy mpamorona maro be liana amin'ny fanolorana ny tolotra ataon'izy ireo amin'ny fampiharana an'io faritra io.
Adobe Photoshop dia iray amin'ireo fandaharana malaza indrindramisy izy ireo. Raha ny marina dia maro ny olona matetika no mifandray amina endrika amin'ny alalàn'ity rindrambaiko ity, ka anio dia hasehonay anao ny dingana ilaina hatao apetaho ny valin'ny pixelated triangular.
Tutorial mba hamoronana vokany pixelated misy triangular
Misafidy ny sary izay te-hanitsy izahay.
Manokatra ny sary avy amin'ny Photoshop izahay mamorona sosona 2 izahay fototra.
Miorina ao amin'ny sosona "Background copie" izahay ary mampihetsika ny fitaovana fanovana maimaim-poana amin'ny CTRL / Cmmm + T. Ao amin'ny safidy 3, dia manamboatra ny marindrano skew ny menio ny fitaovana, manitsy ny fironana amin'ny 45 degre isika ary mamita ny fiovana amin'ny Enter.
Raha tsy miala amin'ny sosona nofidintsika dia mankany sivana / Pixelate / Mosaic ary napetrakay ho 40 ny haben'ny sela.
Nametraka ny fahafaha-manaon'ity sosona ity ho 50 izahay.
Mampihetsika ny sosona izahay "Tahiry kopia" ary avereno avy eo ireo dingana natao tamin'ny "Fondo Copia 2" fa amin'ny fironana mifanohitra, izany hoe, miaraka amin'ny zoro manodidina ny -45 degre.
Mampihatra ny sivana mozaika ihany koa izahay.
Mampiasa ny fitaovana fanovana indray amin'ny sosona izahay ary mametraka ny mitongilana marindrano amin'ny 45 degre, mampihena ny opacity ho 70%.
Izahay dia mampihatra sivana mosaika mitovy amin'ny sosona aoriana sy voila, ny asanay dia ho eo ambanin'ny pixelation telozoro.
Ireto ny dingana tokony horaisina hiteraka ny vokany pixelated triangular. Mila faharetana ireo dingana, na izany aza ary amin'ny fampiharana, dia ho mora tanterahina ireo, izay hahafahantsika ampidiro ao amin'ny lisitry ny fomba sy ny fampiharana ity teknika ity izay ahafahantsika manitsy sy manova sary vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba hamoronana ny vokany telozoro pixelated
Retouching sary haingana miaraka amin'ny Adobe Photoshop
Fomba hanovana mora foana ny endrik'olona amin'ny Photoshop